Umyalezo kasihlalo | Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd.
Ixabiso leshishini, elifana nelomntu, aliphumli kwinto eliyiphumezileyo ukuya kuthi ga kwinqanaba elikhulu. Endaweni yoko ilele kwimishini yokwenyani. Uphuhliso oluqhubekayo lweShuangyang lusekwe kwiinzame zethu zokuqhubeka nokulandela amaphupha ethu.
Kwimeko entsha ebonakalisiweyo kunye nemiceli mngeni kunye namathuba, umngcipheko kunye nethemba, inkampani iyawomeleza amandla ayo kwaye yenza nezicwangciso ngokubanzi. Sizama ukukhulisa amandla ethu apheleleyo, ukuhlakulela ukhuphiswano lwengingqi, kunye nokwakha ulwazi malunga nebrand ukuze sandise isikali seshishini kunye nokubeka emgangathweni ulawulo. Siyazi ngokucacileyo ukuba ukungahambeli phambili kukubuyela umva. Kwixesha elizayo, ukhuphiswano luxhomekeke kubuchwepheshe obutsha, ubunzulu bebrand kunye namandla angaphakathi, amandla angaphandle kunye nokukwazi ukuzinza kwenkampani.
Ukubola kunye nokufa kulinde ngaphambili ukuba awuguquki kwaye uguqukile. Ukuphuhliswa kweShuangyang yimbali yenguqu eqhubekayo kunye nokudlula. Nangona yinkqubo enzima kwaye ibuhlungu, asizisoli kuba sizinikele ekwakheni ikamva leshishini lezixhobo zaseTshayina.
Njengenkokeli yenkampani, ndiyaluqonda uxanduva lwethu olukhulu, kunye nokhuphiswano olunzima lwentengiso. I-Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd. iya kuhambelana nombono wolawulo "wokuqhelaniswa kwabantu, ukuthembeka, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nokugqwesa", ukuzalisekisa ukuzibophelela "kokugcina umthetho, ukwenza izinto ezintsha, nokufuna inyaniso", kunye nokugcina intsebenziswano Umoya "oluncedo macala onke kunye nokuphumelela konke". Sizinikezele kuphuhliso oludibeneyo loluntu, inkampani, abathengi kunye nabasebenzi.